3:16 pm - Monday January 21, 1456
Jose Mourinho Oo Shaaciyey In Sanchez Ku...
Jose Mourinho Oo Shaaciyey In Sanchez Kusoo Jeedo Manchester United
Tababaraha Manchester United, Jose Mourinho ayaa xaqiijiyey in ay meel fiican marayaan wada-hadallada ay kooxdiisu kula jirto laacibka khadka dhexe uga ciyaara Arsenal ee Alexis Sanchez. Mourinho waxa uu sheegay in aanay jirin wax uu qiriyo iyo wax uu shaaciyo toona, sababtuna ay tahay in aan wali... read more »
Fernandinho Oo Heshiis Cusub U Saxeexay ...
Fernandinho Oo Heshiis Cusub U Saxeexay Manchester City
Manchester City ayaa ku guuleysatay inay qandaraas muddo kordhin ah ka saxeexdo laacibka khadka dhexe ee Fernandiho. 32 jirkan reer Brazil oo sannadkii 2013 ay Manchester City £30 milyan kaga soo iibsatay Shakhtar Donetsk ayaa qalinka ku duugayy heshiis laba sannadood ah oo ku dhamaanaya... read more »
Chelsea Oo Raadinaysa Peter Crouch Oo 36...
Chelsea Oo Raadinaysa Peter Crouch Oo 36 Jir Ah
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa bartilmaameed ka dhigatay gool dhaliyaha duqa ah ee Peter Crouch kaddib markii ay ka hadhay Andy Carroll oo dhaawac ah. Crouch oo ay da’diisu tahay 36 jir kana tirsan Stoke City ayaa horraantii bishan qalinka ku duugay heshiis sannad ah oo uu ku kordhiyey... read more »
Yaa Iibsanaya Newcastle United?
Haweenayda ganacsatada ah ee Amanda Staveley ayaa sheegay in ay wali rajaynayso inay iibsato kooxda kubadda cagta Newcastle United. Amanda Staveley ayaa la wariyey inay wada hadallo kula jirto Mike Ashley oo ah mulkiilaha Newcastle United, waxaana ay wararku sheegayaan in 250 milyan oo Gini ay ku... read more »
Tababaraha Manchester United, Jose Mourinho ayaa xaqiijiyey in ay meel fiican marayaan wada-hadallada ay kooxdiisu kula jirto laacibka khadka dhexe uga ciyaara Arsenal ee Alexis... read more »
Manchester City ayaa ku guuleysatay inay qandaraas muddo kordhin ah ka saxeexdo laacibka khadka dhexe ee Fernandiho. 32 jirkan reer Brazil oo sannadkii 2013 ay Manchester City £30 milyan... read more »
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa bartilmaameed ka dhigatay gool dhaliyaha duqa ah ee Peter Crouch kaddib markii ay ka hadhay Andy Carroll oo dhaawac ah. Crouch oo ay da’diisu tahay... read more »
Haweenayda ganacsatada ah ee Amanda Staveley ayaa sheegay in ay wali rajaynayso inay iibsato kooxda kubadda cagta Newcastle United. Amanda Staveley ayaa la wariyey inay wada hadallo kula... read more »
Derderkii Norwich Ee Chelsea, Casaankii Morata iyo Pedro, Cabasha...
Chelsea ayaa rikoodheyaal dirqi ah waxay ugu gudubtay wareegga afraad ee tartanka FA Cup, kaddib markii ay ciyaar casaanku hadh-beelay iskaga hor yimaaddeen Norwich City oo heerka labaad ka... read more »